Saamayn intee le’eg ayuu qashinku ku reebay bilicda Xeebta Boosaaso-Dhageyso • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Saamayn intee le’eg ayuu qashinku ku reebay bilicda Xeebta Boosaaso-Dhageyso
Saamayn intee le’eg ayuu qashinku ku reebay bilicda Xeebta Boosaaso-Dhageyso
January 31, 2019 - By: Abdirisak Faamoos
Boosaaso oo kamid ah magaalooyinka ugu waawayn Puntland sidoo kalena ah Magaalo Xeebeed waxaa lagu tilmaamaa in ay kamid tahay magaalo bilic ahaan aan wanaagsanayn markoo loo eego meelaha qaar sida Xeebaha.
Bulshada ku nool xaafadaha magaalada ayaa la sheegaa in aysan xooga saarin bilicda xeebta isla markaana ay geeyaan wax walbo oo haraadi qashin ah oo ay kasoo saaraan guryahooda.
Maxamed maxamud Qulxiye waa khabiir ku takhasusay deegaanka Bada waxa uu Horseed Media uga Waramay Saamaynta ay leedahay Qashinka adag iyo midka adag la geeyo.
Qulxiye Ayaa Sheegay in saamayn caafimaad Daro ay u keenayso Dadka ku Dhaqan Magaalada Boosaaso iyo weliba magalooyinka kale Hadii ay Cunaan kaluunka laga Soo Jilaabay meelaha ay ka dhow yihiin Qashinka.
Habada Saamaynta ay leedahay qashinka , Waxyaabaha lagu yarayn karo iyo waxyaabo kale ayuu Aqoonyahan Maxamed Maxamuud Qulxiye Uga Waramay Wariye Bashiir Faarax Siciid ugu Horayna Waxa uu Waydiiyay waa maxay Wasakhow?
Hoos ka dhageyso Wareysiga aqoonyahan Qulxiye